बागचाैर नगरपालिका ९ काे वडा कार्यालय उद्घाटन, रुष्ट व्यक्तीहरुद्वारा तालाबन्दीकाे घाेषण
मंसिर ५, सल्यान ।
सल्यानकाे बागचौर नगरपालिकाले बुधबार वडा नम्बर ९ को वडा कार्यालय खोरबारेमा उद्धघाटन गररिएको छ । यसअघि बागचौर नगरपालीका वडा नम्बर ८ र ९ ले संयुक्त वडा कार्यालय बनाएका थिए ।
वडा कार्यालयकाे उद्घटन बागचाैर नगरप्रमुख लाेकमान बुढाथाेकीले गरेका हुन् । उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि तथा नगर प्रमुख लोकमान बुढाथोकीले बागचौर नगरपालिका धेरै संम्भावना बोकेको नगर भएकाले यसमा व्यक्तिबादी सोच र चिन्तन भन्दा माथी उठी समग्र नगरको बिकासमा लाग्नुपर्ने बताए । उनले भने-“बागचौर नगरपालिकाका धेरैजसो वडाहरु ९ नम्बर वडा जस्तै विकट छन् । ९ नम्बर वडा पनि भौगोलिक बनावटले विकटता भएपनि, कृषि पेशा तथा पर्यटकीय हिसाबले गरिब छैन । त्यसैले तपाई हामि सबै मिली समृद्ध वडा निर्माणमा एकजुट भै लाग्नुको विकल्प छैन ।”
सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगर उपप्रमुख कल्पना पुनले वडा कार्यालय संचालनमा आएसंगै अब ९ नम्बरका आम जनताको सेवामा कटिपद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । कार्यक्रमलाई नगर पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीष्म कुमार मल्ल र वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष मोहन चन्दले जनताका हरेक काम छिटोछरितो गर्न आफूहरु सधैं लाग्ने बताएका थिए ।
यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पाटीका नेता लोक बहादुर डाँगिले बागचौर नगरपालिका वडा नं. ९ कृषि क्षेत्रको प्रचुर संभावना बोकेको वडा भएकाले यसलाई प्रचार प्रसारमा लैजान आफुहरु लागी परेको बताए । उनले वडा नं. ९ मा उत्पादन हुने सुन्तलालाई राष्ट्रीय स्तरसम्म पुर्‍याउनको लागी पहल गरिदिन बागचौर नगर प्रमुख लाई अनुरोध गरे ।
कार्यालय उद्धघाटन कार्यक्रमलाई ६ का वडा अध्यक्ष भुपेन्द्र राज वली, ८ का रोमु शाही, ११ का मोहन खड्का, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का नेता लोक बहादुर डाँगी,नेपाली काँग्रेसका नेता झक्कु प्रशाद वली, मालेका भिम बहादुर वली लगायतले शुभकामना मन्तव्यका साथ समग्र वडाको विकासमा लागिपर्न प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
तर बागचाैर नगरपालिकाकाे ९ नम्बर वडामा पर्ने साविक काेटमाैला गाविसकाे वडा नम्बर ८ र ९ लार्इ केन्द्र असहज भएकाे भन्दै केहिले बिराेध जनाएका छन् । भाेगाेलिक हिसावले केन्द्र राखिनुपर्ने भन्दै उक्त वडाबासीले साेचेर सबैकाे पाइक पर्ने ठाउँमा केन्द्र राख्न अाग्रह गरेका छन् । उनिहरुले पहिले कुनै छलफल नगरेर नेताकाे पहुँचका अाधारमा केन्द्र राेखेकाे बताएका छन् ।
स्थानीय टाेप बहादुर अाेली, असाेक डिसी, लाेकेन्द्र डिसी लगाएले साविककाे वडा नम्बर ८ र ९ लार्इ अहिलेकाे वडाकाे केन्द्र पाइक नपर्ने बताएका हुन् । उनिहरुले सबैकाे पाइक पर्ने उपयुक्त स्थानकाे लागी एउटा समिती बनाउनु पर्ने र समितीले छलफल गरेर केन्द्र ताेक्नुपर्ने बताएका छन् । समिती गठन नहुँदा सम्म अहिले ताेकिएकाे वडा कार्यालयमा ताला लगाउने उनिहरुले बताएका छन् ।